बर्दिवासमा उत्पन्न परिस्थितिबारे अनुसन्धान सुरु
आइतवार, कार्तिक ७, २०७८ ०६:११:५४
बुधवार, मंसिर १०, २०७७ नेपालबोट समाचारदाता
महोत्तरी । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले महोत्तरीको बर्दिवासमा बालिकाको हत्यापछि उत्पन्न परिस्थितिबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
बर्दिवास नगरपालिकाका ६ वर्षका बालिका गुलाब साह खातुनको हत्यापछि पक्राउ परेका आरोपितलाई कानूनी कारबाहीको माग गर्दै आफन्त तथा स्थानीयहरूले गरेको आगजनी तथा प्रदर्शनका क्रममा एक जनाको मृत्यु भएको थियो ।
आयोगको प्रदेश नं. २ कार्यालय जनकपुरबाट घटनाको स्थलगत अनुगमन भइरहेको प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए । प्रहरीले चलाएको गोली लागि हिजो बर्दिवास नगरपालिकाका सञ्जय भनिने बुद्धिराज न्यौपानेको मृत्यु भएको थियो ।
आयोगले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसात्मक घटना बढिरहेको भन्दै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न सुरक्षा निकाय तथा नागरिक सतर्क र सचेत हुनुपर्ने बताएको छ । हिंसात्मक घटनामा संलग्नलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न, कानून हातमा लिन खोज्नेलाई कानूनी प्रक्रियाबाटै नियन्त्रणमा लिन, व्यक्तिको ज्यान जाने गरी बल प्रयोग नगर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी घटनामा संलग्नहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र मृतक तथा पीडितहरूलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
स्वस्फुर्त रुपमा आएका प्रदर्शनकारीको बिरोले बुधबार पनि दिनजसो बर्दिवास तनावग्रस्त थियो ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, मंसिर १०, २०७७, ०९:११:००